कसरी एक SEO परामर्शदाता खोज्ने Martech Zone
एसईओ परामर्शदाता कसरी फेला पार्ने
बुधबार, सेप्टेम्बर 14, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
आज बिहान म एक साथीसँग फोनमा थिएँ जससँग कम्पनीले उनलाई कम लागत खोज ईन्जिन अनुकूलन सेवाहरू प्रदान गर्न बोलाएको थियो। उनी अवसरको बारेमा निकै उत्साहित थिए, अन्तत: एक उत्तम सेवा फेला पारे जसले उसलाई एक्सपोजर प्रदान गर्दछ Highbridge सक्छ ... तर लागत को एक अंश मा। यदि यो राम्रो छ भने, हेक ... हामी साइन अप गर्न सक्छौं!
पहिलो कुरा मैले गरेको जब कसैले उत्साहित हुन्छ यो समीक्षा हो तिनीहरूको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण जस्तै उपकरण प्रयोग गर्दै Semrush। तपाईं दायाँ मा परिणामहरू देख्नुहुनेछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, यी नतिजा दयालु छन्। मैले कम्पनीको नाम रोक्का गरें जुन th औं श्रेणीमा छ (ugh!) र तिनीहरू राम्रा छैनन (or वा उच्च) एकल अवधिमा!
यसमा एउटा नोट ... म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं उनीहरूलाई साइटमा खोज्नुहोस् Semrush किनभने तपाईंले खोज्नु भएको कम्पनीले “SEO” जस्ता अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सर्तहरूको लागि श्रेणी दिँदैन। Highbridgeउदाहरण को लागी, सर्तहरु संग सम्बन्धित छ नयाँ मिडिया बजार हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग जैविक रैंकिंग संग केहि शानदार काम गर्छौं, तर हाम्रो उपकरण बाकसमा त्यो मात्र एक उपकरण छ। हामीलाई थाहा छ कि क्रस च्यानल मार्केटिंग रणनीति सबै उपयोगी माध्यमहरूको लाभ उठाउँदछ (एसईओ सहित) सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ। यद्यपि, खोज परिणामहरू समीक्षा गर्नमा कुनै श .्का छैन जुन हामीलाई वास्तवमै थाहा छ कि हामी के गरिरहेछौं।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन परामर्शदाता हो, सायद, उद्योग मा सबैभन्दा सजिलो सल्लाहकार मा प्रमाणिकरण गर्न को लागी… खोज ईन्जिन भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्!
तपाईको इ-मेल सूची बढाउने दुई धेरै धेरै प्रभावकारी तरिकाहरू